နားလည်အောင် သမ္မာကျမ်းစာကို ဘယ်လိုဖတ်ရမလဲ ▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️
၎င်းကိုနားလည်ရန်သမ္မာကျမ်းစာကိုမည်သို့ဖတ်ရမည်နည်း။ သမ္မာကျမ်းစာကို နားလည်အောင်ဖတ်ရန် နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ သို့သော်လူတစ် ဦး စီဖြစ်ရမည် သင်၏စာဖတ်ခြင်းကိုသင်၏ဗဟုသုတအရလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေပါ ကျမ်းချက်များမှ
ထို့ကြောင့်သင်ရှိနေသောအဆင့်ပေါ် မူတည်၍ ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်သင့်အားအကြံဥာဏ်အချို့ပေးသည် အဲဒါကိုမင်းဘယ်ကနေစပြီးနားလည်နိုင်တာလဲ မှန်ကန်စွာ။
1 နားလည်ဖို့ သမ္မာကျမ်းစာကို ဘယ်လိုဖတ်ရမလဲ- ပထမအဆင့်များ
2.1 ၁။ ၎င်းသည်သမ္မာကျမ်းစာနှင့်သင်၏ပထမဆုံးအဆက်အသွယ်ဖြစ်လျှင်
2.2 ၂။ သင်သည်သမ္မာကျမ်းစာနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏အထွေထွေဗဟုသုတကိုနက်နဲစေလိုလျှင်၊
2.3 3. အချိန်မရွေးဖတ်နိုင်သော စာအုပ်များ
2.4 ၄။ သင် ပို၍ အဆင့်မြင့်သောအခါစာအုပ်များ
နားလည်ဖို့ သမ္မာကျမ်းစာကို ဘယ်လိုဖတ်ရမလဲ- ပထမအဆင့်များ
သင်မစခင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒီမေးခွန်းမေးပါ။¿ငါကျမ်းစာအကြောင်းဘယ်လောက်သိလဲ။ "မရ။ အဲဒါကိုမဖတ်ဘဲနဲ့တောင် လူအချို့သည်သမ္မာကျမ်းစာမှပုံပြင်များကိုကြားနာရင်းကြီးပြင်းလာကြသည်ဒါပေမဲ့ အခြားသူများသည်ဤအခြေခံအဆက်အသွယ်မရခဲ့ပါ ဘုရားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်နှင့်အတူ သင်ဘယ်အခြေအနေမှာလဲ။
သင်၏သမ္မာကျမ်းစာကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်စတင်ပါ။ သမ္မာကျမ်းစာကိုစပိန်ဘာသာဖြင့်မရေးထားသဖြင့်ဘာသာပြန်ထားပါသည်။ ရှေးကျသောဘာသာစကားထက်ပိုရှေးကျသောစပိန်ဘာသာစကားသို့ဘာသာပြန်ချက်များစွာရှိသည်။ စာပိုဒ်၏ခြေရင်းတွင်ရှင်းပြချက်များနှင့်အိတ်ဆောင်အရွယ်အစား (သို့) အသုံးစရိတ်ဗားရှင်းကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
တစ်နေ့တာအတွက်အချိန်ဘယ်လောက်ပေးနိုင်လဲဆုံးဖြတ်ပါ။ သင်အချိန်တိုလျှင်တစ်ရက်လျှင်အခန်းတစ်ခန်းသို့နှစ်ကြိမ်ဖတ်ပါ။ မင်းမှာအချိန်ပိုရှိရင်နည်းနည်းပိုဖတ်နိုင်တယ်။ သမ္မာကျမ်းစာသည်ဝိညာဉ်ရေးရာစာအုပ်ဖြစ်သောကြောင့်ဆုတောင်းရန်အချိန်အနည်းငယ် ယူ၍ သင်ဖတ်နေသောအရာကိုနားလည်ရန်ကြိုးစားရန်လည်းအရေးကြီးသည်။
သမ္မာကျမ်းစာပါစက္ကူတိုင်းတွင် icendice အပေါ်တွင် ထို့ကြောင့်သမ္မာကျမ်းစာစာအုပ်ဘယ်မှာလဲမသိလျှင်အညွှန်းစာမျက်နှာ၌ရှာပါ။ သင်၏သမ္မာကျမ်းစာပါအရင်းအမြစ်များကိုအသုံးချပါ။
သမ္မာကျမ်းစာသည်အခြားစာအုပ်များနှင့်အနည်းငယ်ကွဲပြားသည်။ အမှန်မှာ၎င်းသည်စာပေအမျိုးအစားများ (သမိုင်း၊ ကဗျာဆန်ခြင်း၊ ပရောဖက်ပြုခြင်း၊ ဧဝံဂေလိ၊ ဧဝံဂေလိ၊ စာတို ... ) စာအုပ် ၆၆ အုပ်ကိုစုစည်းထားခြင်းမဟုတ်ဘဲဖတ်ခြင်း၊ အချိန်နှင့်တပြေးညီစီစဉ်ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်အခုမှစလုပ်မယ့်သူတွေအတွက် တစ်အုပ်ပြီးတစ်အုပ်ဖတ်ဖို့ကြိုးစားတာမကောင်းပါဘူး.
ခရစ်ဝင်ကျမ်းလေးကျမ်းအနက်မှတစ်ခုနှင့်စတင်ပါ ဓမ္မသစ်ကျမ်းမှMateo, Marcos, Lucas သို့မဟုတ် Juanမရ။ ဤလူလေး ဦး သည်ကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့်မှအသီးသီး၊ ယေရှု၏အတ္ထုပ္ပတ္တိကိုရေးသားခဲ့သည်။ ဒီစာအုပ်တွေထဲကတစ်ခုခု ယေရှုက ဘယ်သူလဲဆိုတာ သင်ပြလိမ့်မယ်။သမ္မာကျမ်းစာ၏အဓိကဇာတ်ကောင်ဖြစ်သည်။
တမန်တော်များ၏လုပ်ဆောင်ချက်များ ကိုရေတွက်ပါ ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ဘုရားကျောင်းတည်ထောင်ခြင်းသမိုင်းမရ။ ဤစာအုပ်သည်စိတ်ဝင်စားစရာစာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်နိုင်သည် ခရစ်ဝင်ကျမ်းများထဲမှတစ်ခုကိုဖတ်ပါ။
မသန်စွမ်း ခရစ်ယာန်အသက်တာအကြောင်းပိုမိုနားလည်ပါတမန်တော်များ၏တမန်တော်များကဲ့သို့သောစာအုပ်အချို့ကိုသင်ဖတ်နိုင်သည် ရောမသို့မဟုတ်သက်သာလောနိတ်လူမျိုးများ ဤစာအုပ်များသည်သင်ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းနားလည်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်ဘဝမည်သို့ခြားနားသည်ကိုကူညီလိမ့်မည်။ သူတို့သည်ဧဝံဂေလိတရားကိုအခြေခံနားလည်ရန်ကောင်းသောခြေလှမ်းများဖြစ်သည်။
၂။ သင်သည်သမ္မာကျမ်းစာနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏အထွေထွေဗဟုသုတကိုနက်နဲစေလိုလျှင်၊
ဓမ္မဟောင်းကျမ်း၏သမိုင်းစာအုပ်များကိုဖတ်ခြင်းဖြင့်စတင်ပါကမ္ဘာ ဦး မှဧသတာသို့ ဒီစာအုပ်တွေ ကမ္ဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းခြင်း၏ပုံပြင်ကိုပြောပြပါ။ သမိုင်းတစ်လျှောက်တွင်ဘုရားသခင်မည်သို့လုပ်ဆောင်သည်ကိုသင်နားလည်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။ အရမ်း ဣသရေလလူတို့၏ ဇာတ်လမ်းနှင့် ဘုရားသခင်၏ အကြံအစည်များတွင် သူတို့၏အခန်းကဏ္ဍကို ပြောပြကြသည်။
ပရောဖက်ပြုချက်စာအုပ်များ (ဟေရှာယမှ မာလခိအထိ) ဖြစ်ပျက်မည့်အရာနှင့်ပတ်သက်၍ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ဘုရားသခင်သည် လူတို့ကို မည်သို့သတိပေးခဲ့သည်ကို ပြောပြပါ။ သင်ဤစာအုပ်များကိုဖတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ပါက၎င်းတို့အားအချိန်နှင့်တပြေးညီဖတ်ရန်နှင့်စာအုပ်တစ်အုပ်ချင်းစီကိုမဖတ်မီသမိုင်းနောက်ခံအခြေအနေကိုရှာဖွေရန်ကောင်းပါသည်။
၏စာအုပ်များ ပရောဖက်ပြုချက်များ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းနှင့် ကမ္ဘာပျက်၊သူတို့တော်တော်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နားလည်ရခက်သည်r ဒါပေမယ့်စိတ်မပူပါနဲ့။ ပညာအရှိဆုံးသမ္မာကျမ်းစာကျွမ်းကျင်သူတွေတောင်ဒီစာအုပ်တွေကိုဖတ်ဖို့အခက်အခဲရှိတယ်။
3. အချိန်မရွေးဖတ်နိုင်သော စာအုပ်များ
၏စာအုပ်များ ဆာလံကျမ်းနှင့် သုတ္တံကျမ်း သမ္မာကျမ်းစာအကြောင်းသင်မည်မျှပင်သိစေကာမူ၎င်းတို့သည်အချိန်မရွေးဖတ်ရန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်။ ဟိ ဆာလံသီချင်းများသည်ကဗျာများနှင့်သီချင်းများဖြစ်သည် ဘုရားသခင်နှင့်အလွန်ရိုးသား။ သုတ္တံကျမ်း၌များစွာရှိသည် နေ့စဉ်ဘဝအတွက် ပညာရှိအကြံဉာဏ်။
၄။ သင် ပို၍ အဆင့်မြင့်သောအခါစာအုပ်များ
သီချင်းများ၎င်းတို့သည်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတစ် ဦး အကြားချစ်ခြင်းမေတ္တာတန်ဖိုးအကြောင်းကဗျာများဖြစ်သည်။
ဒေသနာဘုရားသခင်သည်အရာအားလုံး၏အသုံးမ ၀ င်မှုအပေါ်ရောင်ပြန်ဟပ်သည်။
အလုပ်လွယ်လွယ်ကူကူအဖြေမပေးဘဲဆင်းရဲဒုက္ခနှင့် ပတ်သက်၍ အခက်ခဲဆုံးမေးခွန်းများကိုစူးစမ်းသောစာအုပ်ဖြစ်သည်။
အထက်ပါဥပမာများသည်သမ္မာကျမ်းစာဖတ်ရန်အကြံပြုချက်အချို့သာဖြစ်သည်။ သင်လည်းရပါတယ် စာအုပ်များဖတ်ခြင်းအစီအစဉ်များကိုအွန်လိုင်းမှရှာဖွေပါ၎င်းသည်သင်၏အခြေအနေနှင့်ပိုမိုသင့်တော်လိမ့်မည်။
ကြိုးစား သမ္မာကျမ်းစာကိုပိုသိသောယဇ်ပုရောဟိတ်၊ သင်းအုပ်ဆရာ (သို့) လူတစ် ဦး နှင့်စကားပြောပါမရ။ ဒီလူကမင်းအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်ပြီးမင်းရဲ့မေးခွန်းတွေအားလုံးကိုဖြေနိုင်တယ်။
သင်ပုံမှန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသွားလျှင်၊ သင်သည်သမ္မာကျမ်းစာနှင့်သင်၏ဘ ၀ အသုံးချပုံအကြောင်းပိုမိုလေ့လာလိမ့်မည်။ ချာ့ချ်သည် သမ္မာကျမ်းစာကို ဖတ်ရှုရန်၊ လေ့လာရန်နှင့် နားလည်ရန် စုစည်းလာရန် ၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်ကို အသိအမှတ်ပြုထားသော လူတစ်စုဖြစ်သည်။
အွန်လိုင်းနှင့် စာအုပ်များကဲ့သို့သော အရင်းအမြစ်များစွာလည်း ရှိပါသည်။ နေ့စဉ် ဘုရားဝတ်ပြုခြင်း၊ မှတ်ချက်များ၊ ကျမ်းစာလက်စွဲများ စသည်တို့မရ။ အဘိဓာန်များ၊ မြေပုံများ၊ ခေတ်သမိုင်းနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းအချက်အလက်များကဲ့သို့သမ္မာကျမ်းစာစာသားကိုသင်ပိုမိုနားလည်ရန်ကူညီသည်။ မင်းမသင်ယူဘူးဆိုရင်မင်းမလုပ်ချင်တာကြောင့်ဘဲ။
ဒါ ဖြစ်ပြီ! ဒီဆောင်းပါးကမင်းသိဖို့ကူညီလိမ့်မယ်လို့ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် ၎င်းကိုနားလည်ရန်သမ္မာကျမ်းစာကိုမည်သို့ဖတ်ရမည်နည်းမရ။ ယခုသင်သိလိုလျှင် သင်္ဘောသဖန်းပင်ကိုယေရှုဘာကြောင့်ကျိန်ဆဲရသလဲ, ဆက်လက် browsing Discover.online ။
Calvinism နှင့် Arminianism အကြားခြားနားချက်ကဘာလဲ။